Ogaden News Agency (ONA) – Shir ay isugu yimaadeen jaaliyadda Sacuudiga faraca Al-Jubayl
Shir ay isugu yimaadeen jaaliyadda Sacuudiga faraca Al-Jubayl
Waxaa habeenimadii Jimacaha ahayd shir isugu yimid jaaliyadda Dammaam qaybta Al-Jubayl ee dalka Sacuudiga. Shirkaa oy soo qabanqabiyeen xubnaha jaaliyadda ee qaybtaa qaabilsan oo uu horkacayay halgame Gacan.
Shirka oy ka soo qaybgaleen xubnaha jaaliyadda Al-Jubayl ayaa waxaa lagaga arinsanayay arima farabadan oo quseeya jaaliyadda iyo halganka shacabka S.Ogadenya uu ugu jiro xoreynta dalkooda. Wafdigii kormeerka ugu yimid jaaliyadda ayaa warbixino ka siiyay xaalada uu marayo halganka iyo horumarka ay gaadheen jaaliyadda S.Ogadenya ee ka hawlgasha Sacuudiga.
Waxaa sidoo kale shirka lagu martiqaaday oo kaga qaybgalay khadka teleefoonka Hogaanka Warfaafinta ururka oo ugu horeynba u gudbiyay xubnaha shirka fadhiyay bogaadin iyo salaan isagoo xusay kaalinta muuqata ee jaaliyadaha Sacuudiga ay ka qaadanayaan halganka. Wuxuu HWF warbixin waafi ka bixiyay xaaladda uu marayo halganka isagoo si gaar ah u xusay heerka uu gaaray halganka hubaysan ee shacabka S.Ogadenya iyo guuldarada ka soo gaadhay goobaha dagaalka ciidamada cadawga iyo maxaysatadii uu qortay. Wuxuu HWF uga xogwaramay shirka banaabaxyadii hadheeyay Yurub iyo Amerika ee lagaga soo horjeeday wafdigii uu soo diray gumaysiga ee la doonayay in shucuubta lagu jaha-wareeriyo. Wuxuu sheegay hogaanka in arintaa ay ka dhalatay faa’iidada ah inay u midoobaan jaaliyadaha ku dhaqan dibadaha ee cadaadiska iyo guamaysiga uu ku hayo Wayaanaha sidii la’isaga dulqaadi lahaa dulliga. “Qawmiyadahaa iskaashaday oo Jaaliyadaheena sida aadka ah u habaysana ay hogaaminayaan ayaa fashilyay qorshihii Wayaanaha.” ayuu yidhi hogaanka.
Ugu dambayntii waxaa lagu gaadhay shirka go’aano wax ku ool ah oo dardar galin doona geedi socodka hawlaha jaaliyadda iyo kaalinta ay ka qaadnayaan hawlaha halganka.
waa dadaal fiican, jaaliyadda reer Ogaadeeniya ee Sacuudigu way dadaalayaan,
guulaysta guullana ha idinla jiro